Tompona “Radio” nopotehan’ny Tetezamita : MBOLA TSY TAFARINA 8 TAONA ATY AORIANA -
AccueilRaharaham-pirenenaTompona “Radio” nopotehan’ny Tetezamita : MBOLA TSY TAFARINA 8 TAONA ATY AORIANA
14/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nomarihana omaly ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Radio. Nisy ny loa-bary an-dasy nentina nanamarihana izany satria manana anjara toerana lehibe amin’ny fitaizana ny vahoaka ny Radio na dia eo aza ny gazety an-tsoratra sy haino aman-jery. Mbola nisongadina nandritra ny fanamarihana omaly ny takaitra nentin’ireo tompon’ny Radio maromaro, noho ny, fanakatonana ireo Radio maro be nandritra ny fitondrana ny Tetezamita. Raha tsiahivina, nahatratra 80 ireo Radio nakatona ny taona 2009-2010, ary 77 isa amin’ireo ny Radio nitsangana tamin’ny andron’ny Tetezamita. Fa isan’ireo nitondra faisana tamin’izany ny Radio fototra, ny Radio Mbs. Ary 8 taona aty aoriana, tena mahatsiaro nopotehan’ny fitondran’ny Rajoelina tanteraka, ireo tompon’ny Radio, ary mbola mitondra ny takaitran’izany izy ireo, raha araka ny fanambaran’ny talen’ny Famoahan’ny Radio Mbs, Ralaivaohita Jöel, omaly nanao hoe “Nahatsiaro tena nopotehan’ny fitondrana Tetezamita tanteraka izahay. Tsy mankasitraka ireny fanakatonana ireny izahay ary efa nangataka fisokafana efa tamin’izany fotoana izany fa mbola tsy misokatra hatramin’izao. Vokatr’iny fanakatonana iny mantsy dia mbola tsy manana asa mari-pototra izahay. Tena mafy ny fiantraikan’ireny taminay.”
Isan’ireo Radio nitondra faisana ihany koa ny “Frequence plus” sy ny Radio Fahazavana. Raha tsiahivina dia teo ampanatanterahana fandaharana mihitsy iry voalohany no niditra ankeriny ry kolonely Lylyson nampiasa herisetra tamin’ireo mpiasa tao sy ny vahininy. Mpanao gazety miisa 5 ny Radio Fahazavana indray no nampidirina am-ponja tamin’iny fotoana iny. Ny mahagaga anefa dia isan’ireo haino aman-jery nitsangana tamin’ny andron-dRajoelina ny Kolo Tv sy ny Kolo Fm nefa tsy niharan’ny fanakatonana. Satria ve i Hajo no filoha lefitry ny Tetezamita tamin’izany ka tsy niharan’ny tsindry hazo lena. Izay midika fa tsy fanajana ny demokrasia sy ny fanehoan-kevitra avokoa. Na ny “Transparency International” aza nanambara tamin’izany fotoana izany fa “Nihemotra ny laharan’i Madagasikara tamin’ny fanajana ny demokrasia.” Fanambarana izay manaporofo fa tamin’ny andron’ny Tetezamita dia ny fanagejana ny fahalalan’ny mpanao gazety no nanjaka satria ny tsy famelana haino aman-jery handeha dia midika fanapenam-bavan’ny demokrasia. Saingy efa tsy eo amin’ny toerana intsony ny MLE amin’izao fotoana izao ka mahay miteny fa misy ny fanapenam-bava nefa tamin’izany indrindra no nitranga ny tsy fanajana ny fahalalan’ny fanehoan-kevitra.